Xaalada Addis ababa oo Faraha kabaxday & xaalka Oromada oo I Qirayay maraysa. | ogaden24
Xaalada Addis ababa oo Faraha kabaxday & xaalka Oromada oo I Qirayay maraysa.
Dhalinyarada Qomiyadaha Oromada iyo Amxarada ee Fano iyo Qiiro oo kala Taageeraya Labada Jabhadood ee OLF iyo Ginbot 7- oo Horay Gobolada isugu Farasaaray, ayaa ugu dambays badhtamaha magaalada Addis ababa isku baacsanayay maalinimadii shalay ahayd oo dhan.
Labada Urur dhalinyaro oo ahaa Kooxihii Abaabulaa ee Kacdoonka kala Harjeedey Taliskii Kooxda TPLF kalana Taageersanaa 2-dan Jabhadood oo mid waliba u Hanqal Taagayso lawareegida Talada dalkaasi Itobiya, ayaa marar Hore sidan oo kale isugu dhacay balse xaaladu marna ma Gaadhin Heerka ay haatan Gaadhay oo ah in Oromadii suuqyada iyo Jidadka magaalada laga baacsado.
Sida uu Ogaden24 u xaqiijiyay muwaadin ree Ogadenia ah oo kusugan magalada Addis ababa dhalinyarada Amxarada ayaa u awood sheegatay, dhalinyarada Oromada oo ahaa kuwa Horseeday dhibaatada kadhacday magalada Addis ababa.
Laga bilaabo Makhrinimadii majirin wax iska Hor-imaad ah oo Jidadka magalada kadhacay dhamaan meelihii labada dhinac isku Eryanayeena waxaa kusoo Hadhay dhalinyarada Xabashida” ayuu yidhi muwaadinkan oo intaasi kudaray in dhalinyaradii Oromada ay xaafadaha kala Galeen markii laga itaal roonaaday.
Koox dhalinyaro Axmaara ah oo Tira Gawaadhi ah oo ay u arkeen inay Oromo leedahay weerar kuqaaday ayay Fiidnimadii xalay isku dhaceen ciidanka Police-ka, waxaana isku dhacaasi kadhashay dhaawac ilaa 5-ruux oo 2-Police tahay.
Xaalada Guud ee magalada Addis ababa oo uu maanta ka furmayo shirka madaxda Urur Goboleedka IGAD ayaa lasoo dhoobay ciidamo tira badan oo isugu jira milateri Nabad sugid iyo Police-ka caadiga ah.
Guuldarada deg dega ah ee dhalinyarada Oromada kasoo Gaadhay dagaalka ay kudoonayaan inay magalada Addis ababa kaga Qaataan Qomiyada Axmarada oo ah Tan Hantida iyo dhismayaasha ugu badan kuleh magalada, ayaa Horseedi kara dagaal dhiig badani ku daato oo Gabi ahan xididada u siiba waxa Itobiya Laysku dhaho oo haatan aysan jirin Qomiyd mida kale Aaminaysa.